विप्लवका नेताले दिए अन्तराष्ट्रिय अदालत जाने चेतावनी, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
काठमाडौं । नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाका एक युवा नेता नर बहादुर कार्कीले सरकारले व्यतिmगत स्वतंत्रता र गोपनीयताको ख्याल नगरि मानब अधिकार हनन गरेको आरोप लगाउँदै अन्तराष्ट्रिय अदालत जाने चेतावनी दिएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमा एक स्ट्याटस लेख्दै उनले विप्लव लगायतका नेताहरुको प्रहरी प्रशासनले कल ट्रयाकिङ गर्ने गरेको तर्फ संकेत गर्दैै राज्यले मुलुकमा अघोषित संकटकाल थोपरेको बताएकाछन। प्रहरीले विप्लवको लोकेशन पत्ता लगाउँन कल ट्रयाकिङ गर्ने गरेको कुरा सञ्चार माध्यममा आएको थियो।
अदालतको अनुमती बिना नै मनपरि ब्याक्तीहरुको कल ट्रयाकिङ गरेर ब्यक्तीको गोपनियताको ठाडो उल्लंघन गरेको उनको भनाइ। प्रहरीले आफ्नो समेत कल ट्यापिङ्ग गरेको उनको भनाई छ।
केहि समय अघि नेकपामा प्रवेश गरेका कार्की चर्चित सामाजिक अभियान्त हुन्। उनले फेसबुकमा यस्तो लेखेका छन्।
'मलाई थाहा छ म कहाँ छु भन्ने बारे राज्य परिचालित र अघोषित संकटकाल थोपर्ने हरुलाई थाहा छ, मलाई यो पनि थाहा छ म माथि कुन बयान र अपराधको मुद्दा-लगाउने सम्भावना छ, तर म भागेर बाच्ने छैन । मलाई थाहा छ लोकेसन थाहा पाउन यो राज्यकै आफ्नो कानुनले सुबिधा नदिएको 'अदालतको अनुमती बिना मेरो कल डिटेल लिन नपाउनेु सुबिधा सुरक्षा निकायले प्रयोग गरेको छ । हजारौ फोन हरु गैह्र न्यायिक रुपमा सुरक्षा निकायले ट्र्याकिङ गरेको छ। मेरो फोन पनि ट्यापिङ भएको छ। म फोन छोडेर जान्न किनकी भोली मैले यो सुरक्षा अधिकारि, प्रशासन र टेलिकम बिरुद्ध मेरो अधिकार हननको मुद्दा- अन्तरराष्ट्रिय अदालतमा लैजाना सक्छु । मेरो मोबाइलमा मेरो अधिकार छैन भने, मेरो गोपनियता माथि मजाक गर्ने र मेरै पैसा लिने सेवा प्रदायक ब्यबस्थापनले सामुहिक अधिकारको हनन बिरुद्द जनता र विश्व समुदायलाई उत्तर दिनु पर्नेछ । यो मुद्दा- मैले आफ्नो निम्ती होइन ती सबै पैसा तिरेर सेवा लिने हरुको असुरक्षाको बिरुद्द यहाँ अभिब्यक्त गरेको छु ।'